Fanatanjahan-tenan’ny mpianatra ao Ranomafana Ifanadiana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Klioba tokana hany mijoro amin’ny taranja lomano ao amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany ny “Natation Club Ranomafana”. Nisy ihany mantsy tany Mananjary, Manakara taloha fa matimaty izany taty aoriana. Tokana araka izany koa ny ligy any an-toerana izay tantanin-dRamatoa Ialifara. Niorina tamin’ny 3 avrily 2019 ny klioba. Antom-pijoroany ny hampivelarana ny taranja lomano amin’ny fanabeazana sy fampianarana. Nambaran’i Armel Delysse, mpampianatra lomano sady mpitsabo ao amin’ny ranomafana fa « taranjam-panatanjahan-tena tsy dia mbola misandrahaka sy tsy ironan’ny olona loatra ny lomano satria izy ity dia mila fotodrafitrasa manokana, ny fitaovana ilaina aminy toy ny solomaso: lafo vidy. Ary maro ireo ankizy ao an-toerana no tia lomano fa tsy misy tekinika.» Ankehitriny, 29 ny mpikambana mandrafitra ny fikambanana raha 8 monja tamin’ny herintaona nanokafana azy ka ny ankizivavy no tena betsaka. Taizaina miaraka amin’ny fitsipika tahaka ireo fikambanana anabeazana ankizy ireny izy ireo amin’izany. Ora roa sy sasany isaky ny alarobia tolakandro sy sabotsy no ianarana fa afaka manao fanazaran-tena koa amin’ny andro hafa mampalalaka azy ireo. Tombony ho an’ny ao Ranomafana ny fananana io dobo filomanosana io satria afaka manao fanazaran-tena hatrany ny mpianatra amin’ny volan-dririnina iny (volana jona izay fikatonan’ny dobo filomanosana amin’ny faritra hafa toa an’Antsirabe sy ny renivohi-paritra hafa manerana an’i Madagasikara). Nanana solotena telo tafiakatra handray anjara tamin’ny fifaninam-pirenena (petit bassin de 25 m) natao tamin’ny 28 febroary hatramin’ny 1 marsa teo tany Mahajanga ny fikambanana taorian’ireo fifanitsanana natao taty amin’ny faritra tamin’ny volana jona sy okitobra lasa iny. Ireto avy izy ireo : Herivola Armélie (13 taona), Rajaonarison Arouka (12 taona) ary Rajaonarison Kennedy Zidane (8 taona), izy no zandriny indrindra. Mpianatry ny Lycée Fo Masin’i Jesoa ao Ranomafana avokoa izy telo mianadahy ireo izay hany manana ny « licence » ahafahana mandray anjara amin’ny fifaninanana toy izany. Tsara amin’ny ankapobeny ny vokatra azon’izy ireo satria nihoaran’izy ireo ny « temps d’engagement » takina amin’ny fifanitsanana isam-paritra ary sangany aty amin’ny tapany atsimon’i Madagasikara kanefa klioba zandriny indrindra nandray anjara. Mbola andrasana ny filaharana avy any amin’ny foibe nasionaly. Tombontsoa maro no azo avy amin’ny lomano toy ny fanalana sorisorin-tsaina (stress), fa indrindra indrindra : mamolavola ankizy manan-talenta sy mivelatra amin’ny maha olona sy ny talentany izy ity. Maro amin’ireo olona manana andraikitra ambony eto amin’ny firenena ohatra no sangany tamin’ny taranjam-panatanjahan-tena lomano ity.
Amin’ny maha klioba zandriny ity ao Ranomafana ity dia maro ny ezaka tsy maintsy tratrarina. Fa araka ny nambaran’ny mpanabe lomano ao an-toerana dia mangataka ny federasiôna izy ireo mba hanome fiofanana ireo mpanazatra sy ny mpilomano mandritry ny vanim-potoanan’ny ririnina. Olana mantsy dia mangovitra ireo mpilomano avy ao an-toerana rehefa manao fifanitsanana amin’ny toeran-kafa amin’ny fotoana toy izany na dia ampy traikefa. Irina araka izany ny hisian’ny dobo filomanosana ampiasana rano mangatsiaka raha tiana handroso io taranjam-panatanjahan-tena iray io. Vinan’ny ligy ankehitriny ny hanangana sekoly fianarana lomano mifanindran-dàlana amin’ny fisian’io fikambanana io. Mba hampivelarana ity taranja ity ihany koa dia manentana ny sekoly rehetra ao an-toerana ny mpiandraikitra ny klioba hiara-miasa na hampiraika ny taranjam-panatanjahan-tena amin’ny taranja lomano koa. Marihina fa amin’ny fialan-tsasatry ny Paka io ny fifaninanam-pirenena « grand bassin ou bassin de 50 m ».